बेइजि in मा5अनौंठो गतिविधिहरु यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मार्गदर्शकहरू, बीजिंग
केहि बेरको लागि बेइजिङ यो एशियामा दर्शनीय स्थलहरूको लागि एक ठूलो गन्तव्य भएको छ। यसमा ह Hongक of वा शंघाईको भव्यता छैन, तर चिनियाँ राजधानी यसको आकर्षण छ।
कहिलेकाँही कोही सबै भन्दा टुरिस्टी गर्दै गएको चाहँदैन। तपाई बिभिन्न सम्झनाहरु पाउन चाहानुहुन्छ ताकि तपाईले अधिक परम्परागत एजेन्सीहरु र वेबसाइटहरु को प्रस्ताव बाहिर बाहिर गतिविधिहरु र गन्तव्यहरु को लागी शुरू गर्न। यसको बारेमा सोच्दै हामीसँग यहाँ प्रस्ताव छ बेइजि inमा ird अनौंठो गतिविधिहरू। रमाईलो गर्नुहोस्!
1 परित्याग गरिएको ग्रेट वालको खण्ड पार गर्नुहोस्
2 बाइक सवारी
3 बेइजि contemp बिचार गर्दै खाने र पिउने
4 बेइजि inमा कराओके
5 बेइजि inमा आइस स्केटिंग
परित्याग गरिएको ग्रेट वालको खण्ड पार गर्नुहोस्
सामान्यतया, पर्यटकहरू महान पर्खालको केही भागमा केन्द्रित छन् जुन सहरको नजिक छ र पुनर्स्थापित गरिएको छ। तिनीहरू कुनै पनि हिसाबले खराब छैनन्, तिनीहरू सुन्दर छन्, उनीहरूले कसरी पर्यटकहरू प्राप्त गर्ने जान्दछन् र तपाईं सबवेबाट त्यहाँ पुग्न पनि सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाईं त्यो अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने धेरै पुरानो भएकोमा त्यहाँ हेर्नु जस्तो केहि छैन। पर्खाल एक सानो भाँचिएको, तल दगुर्नुहोस्, परित्याग। यसको लागि तपाइँको सेक्सनहरूमा भाग्नुपर्दछ सिमाताई - जिन्शालिling वा अल जियांग्सुई ताल।
तपाईं केहि साईन अप गर्न सक्नुहुन्छ घोडा सवारी वा पैदल यात्रा भित्ताको माध्यमबाट र शहरको पहिलो इको रिसोर्टमा रहनुहोस्, रेड क्यापिटल रन्च, पुनर्स्थापित विलाहरूको समूहले बनेको थियो। अर्को चाखलाग्दो साइट आवासबाट सिसाका भित्ताका केही अंशहरूमा विशेष पहुँचको साथ महान पर्खालबाट कम्युन हो। एक लग्जरी।
बाइक भाँडामा लिनु भनेको एक उत्तम चीजहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले भ्रमण गर्न सक्नु हुन्छ। स्वतन्त्रता यसले तपाईंलाई दिनुहुन्छ, ढिलो र चालको लागि एकै समयमा गति, सबै एक मोटरसाइकल सवारीमा उत्कृष्ट छ।
चिनियाँ राजधानीको सब भन्दा सुन्दर ठाउँ मध्ये एक हो Houhai ताल, बेइजि ofको बीचमा। यो एक विशाल ताल हो र उही नामको नजिकैको हटंग एक बनेको छ बेइजि of को धेरै राम्रो redoubt। त्यहाँ सीकाफेटेरियस, बारहरू, रेस्टुरेन्ट र निवासहरू र पर्यटक को हिसाबले यो लोकप्रिय को समुद्र हो। ठीक छ, तालको वरपरको क्षेत्रमा तपाईं ट्यानडेम बाइक भाडामा लिन सक्नुहुन्छ।
भाँडा प्रति दिन र प्रति घण्टा हो र त्यहाँ डबल र ट्रिपल बाइकहरू छन्। केहि बाइक पुरानो र विचित्र छन्, अरू बढि आधुनिक छन्। एक राम्रो घामको दिन संग यात्रा उत्तम छ। यो गर्न बन्द नगर्नुहोस्।
बेइजि contemp बिचार गर्दै खाने र पिउने
यो विश्राम लिन, खाने र पिउने र हाम्रो भ्रमणको उद्देश्य भएको शहरको चिन्तन गर्न टेरेस भेट्टाउनु सधैं राम्रो विचार हो। बेइजि In मा कि को लागी एक राम्रो ठाउँ हो होटल साम्राज्यको टेरेस। यो ड Dongचेng जिल्लामा निषिद्ध शहर, Tiananmen स्क्वायर, Beihai पार्क वा Jingshan पार्क निकट, अवस्थित छ। यो २०० 2008 मा निर्माण गरिएको हो र यो एक पाँच तारे होटेल हो।
यसमा दुई रेष्टुरेन्टहरू र यिन भनिने छत पट्टी जान्न लायक होटल पूर्वी ढोकाको नजिक छ र तपाईं धेरै टेरेसहरू पार गरेर पट्टीमा पुग्नुहुन्छ। को Panoramic दृश्य यो ठूलो छ र त्यहाँ लामो समय सम्म रहिरहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै घामको घाममा सूर्यास्त हेर्दा उत्तम छ।
आराम गर्न अर्को ठूलो ठाउँ हो म्यान कफी, शहरको सब भन्दा ठूलो र अनौंठा कफी पसल मध्ये एक र तपाइँ सायद भ्रमण गर्नुहोस्। भित्री रूखहरू छन्। हो, तपाईंले पढ्नुभयो कि सही रूपमा, इनडोर रूखहरू, चलाखीपूर्वक एकै समयमा एक सुपर आधुनिक र न्यानो डिजाइनमा राखिएको: सिमेन्ट भित्ता र फ्लोर, एन्टिक आर्मचेयरहरू, भिक्टोरियन र मोरक्कन एयरको साथ डेस्क लैम्प, क्रिस्टल झूमर, चिनियाँ लालटेनहरू ...
त्यहाँ जताततै सॉकेटहरू छन् त्यसैले तपाईं आफ्नो ल्यापटपको साथ जान र छुट्टीमा होमवर्क गर्न वा स्कूल पछि जान सक्नुहुन्छ। टेरेस। कफि उत्तम छ, राम्रो ब्यारिस्टा द्वारा सञ्चालित, र सेवा मैत्री र धेरै नम्र छ। कफीको अतिरिक्त, वाफलहरू र टोस्ट पनि दिइन्छ। एक साधारण वाफलको मूल्य २ R आरएमबी हुन्छ तर चकलेट, क्रीम र फलहरूको साथ यो R 28 RMB सम्म जान्छ। कोरियाली बर्गरको लागत R 38 RMB, अधिक वा कम।
प्रत्येक दिन बिहान। बिहान देखि २ बिहान र बेलुका खोल्नुहोस् सानलिटुनमा छ।
बेइजि inमा कराओके
सम्पूर्ण एशिया कराओके फफल्दै छ। यो तथ्यसँग गर्नुपर्दछ कि दैनिक जीवनमा एशियनहरूले आफूलाई अस्खलित र शिष्टाचार हुन उक्साउँदैनन् र परम्परा जहाँसुकै शासन गर्दछन्। त्यसैले शीर्ष मा एक सानो रक्सी संग तिनीहरू कराओके मा पागल हुन्छन्। हामी साथीहरूसँग कुनै पट्टीमा वा घरको पार्टीमा के गर्छौं, तिनीहरू कराओकेमा गर्छन्।
होटल र शहरका सबै महत्त्वपूर्ण सडकहरूमा कराओक्सहरू छन्। धेरै संकेतहरूले कराओकेको सट्टा भन्छन्, KTV। प्रवेश द्वारमा तपाईंले भुक्तान गर्नु पर्ने समय तपाईंले भुक्तान गर्नै पर्दछ र त्यसपछि तिनीहरूले तपाईंलाई अडियो र स्क्रिन, आर्मचेयरहरू र माइक्रोफोनको साथ निजी कोठामा लैजान्छन्। स्पष्टतया तपाईले पेय पदार्थ र खान-पानि अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र धुवाँ जस्तो गरी मात्नुहोस्।
बेइजि inमा आइस स्केटिंग
यदि तपाइँ जाडोमा चीन जानु भयो भने तपाई धेरै रमाउन सक्नुहुनेछ बरफ रिinks्क। एक पुरानो, चिनियाँले भरिएको र केहि पर्यटकहरू सहित, यदि कुनै छ भने, त्यो हो Shichahai स्की ढलान। थोरै पैसाको लागि तपाईंले स्की स्केट्सको साथ स्लेज, स्केट वा बाइक भाडामा लिनुभयो र यो हो, तपाईं धेरै रमाईलो गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि केहि मिठो छ कि तपाईं एक विशाल, सुपर सुन्दर कपास क्यान्डी खरीद गर्न सक्नुहुन्छ तस्वीर को लागी।
यो स्की ढाल कहाँ छ? Shichahai यो बेइजि sub सबवेको लाइन line को एक स्टेशन हो। तपाईं बाहिर जानुहोस् र तुरुन्तै ट्र्याक हेर्नुहोस् ताकि यो हराउन असम्भव छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » बीजिंग » बेइजि inमा ird अनौंठो गतिविधिहरू